Awoodda Weyn ee OFTEC, GasSafe, HETAS, Stroma Certified. Tamarta Maalgelinta
Home > Aqoonsiga
Waxaan leenahay dhamaan shahaadooyinka loo baahan yahay si loo rakibo kululayntaiyo tamarta la cusboonaysiin karoxalalka gurigaaga. Tani waxay ku siinaysaa nabada maskaxda ah ee aad helayso adeegga rakibida ugu nabadgelyo badan.
Maadadeena waaGaasta Diiwaangashan taas oo macnaheedu yahay in la hubiyey si aan u hubinno in aanu nahay xirfadle ah oo uqalma inuu si ammaan ah iyo sharci ahaanba u shaqeeyo gaas.
Diiwaanka Amaanka Gaas
OFTEC waxay qaadataa kaalin hoggaamineed oo dejiya heerarka warshadaha oo maamulaya nidaam diiwaangalin ah oo khuseeya farsamoyaqaanada rakibaya, komishanka iyo adeegga kuleylka iyo qalabka wax lagu kariyo.
The Tamarta dib loo cusboonaysiin karo Caadiga Macmiilka waxaa la aasaasay by Ururka tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Tamarta Maalgelinta u qor codsigan. Hadafku waa in la hubiyo khibrad tayo sare leh oo loogu talagalay macaamiisha kuwaas oo iibsanaya ama u kiraysanaya nidaamyada tamarta yar-yar ee guryahooda.
Cusboonaysiinta Tamarta Macmiilka Diiwaanka
HETAS waa hay'ad rasmi ah oo ay aqoonsan tahay Dawladda si ay u ansixiso qalabka korontada iyo shidaal adag oo qalabka kulul, shidaal iyo adeegyo ay ka mid yihiin diiwaangelinta rakibayaasha kartida leh iyo adeegyada ganacsiga.
Tamarta Maalgelinta waa la aqoonsan yahay STROMA la Qorshaha Shahaadaynta Microgeneration (MCS)taas oo ah nidaam tayeysan oo tayo leh oo qaran oo la aqoonsan yahay, oo ay taageerto Waaxda Tamarta iyo Isbeddelka Cimilada. MCS waxay cadeyneysaa tiknoolajiyada microgeneration ee loo isticmaalo in ay soo saaraan koronto iyo kuleylyo ilaha dib loo cusboonaysiin karo.
MCS sidoo kale waa shardi u-qalmitaanka maaliyadeed ee Dawladda, oo ay ku jiraan Nabadgelyada Taraafiga ah iyo Abaalmarinta Cabbiraadda Cusboonaysiinta.